Nanome tolo-kevitra ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) momba ny lalàm-pifidianana, fepetra hametrahana fitoniana ary ny tetiandro sy datim-pifidianana. Tranga telo no azo eritreretina momba ny datim-pifidianana. Voalohany amin’izany ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan’ny fotoana. Ny 29 aogositra 2018 ny daty naroson’ny CENI ho an’ny fihodinana voalohany. Tranga faharoa nambaran’ny CENI nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety, omaly 08 mey 2018 ny fanatontosana ny fifidianana araka ny voalazan’ny andininy faha-47 amin’ny lalàm-panorenana. Raha io no arahina, ny alarobia 28 novambra 2018 ny fihodinana voalohany. Ny fanemorana ny fifidianana noho ny antony voalazan’ny lalàm-panorenana ny tolo-kevitra fahatelo nanaovan’ny CENI fanambarana. Amin’ny 29 mey 2019 ny fihodinana voalohany raha io hevitra fahatelo io no arahina.
Noho izany, mitaky ny famaritana lalàm-pifidianana mazava tsara ny CENI. “Takiana hazava amin’ity volana mey 2018 ity ny lalàm-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika mba ahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fifidianana sy manatanteraka amin’ity taona 2018 ity.
‹ FANODIKODINANA VOLAM-PANJAKANA: Voasazy hanao asa an-terivozona	› SYSTEME DES NATIONS UNIES : Le partenariat avec le gouvernement Malagasy consolidé